Imba - Tinogamuchirwa kuGenimal Biotechnologies murabhoritari
Isu tinopa hunyanzvi hweDNA bvunzo mhinduro kune vafudzi sevhisi. Isu tichave nechokwadi chekuti iwe unogara uchiwana zvakanakisa Mhedzisiro. Tinovimba unonakidzwa nekutipa yako DNA bvunzo.
Raira DNA Bvunzo
Tora Mhedzisiro Yangu
Tevedzera Yangu DNA Bvunzo
Yedu yekutanga ndeyekupa isingaenzaniswi, yepamusoro tier sevhisi. Iine zvizere zvoga kufamba kwebasa, Genimal inoramba yakashinga yakangwarira mukupa mhedzisiro chaiyo uye chaiyo inogoneka nekuda kwenzira dzayo dzechizvino-zvino.
Kurumidza Kumhanyisa Zvako
Kutenda kune edu otomatiki ekuongorora marobhoti, isu tinounza mhedzisiro mu nguva pfupi kwazvo.
Zvirwere zvinotapukira : 1-3 mazuva
Chirwere cheGenetic, Colotest: 1-6 mazuva
DNA kuita zvepabonde: 1-3 mazuva.
Isu tinoita zvese zvatinogona kuti tikupe iwe ne mitengo yakanakisa pane yega DNA bvunzo. Kune vafudzi kana huwandu hwakawanda hwekuongorora, isu tinopa makotesheni.
Rakachengeteka DNA chitupa
Zvitupa zvedu zvese zveDNA zvinouya nekodhi yekuongorora-tamper-proof.
Kubhadhara mu3X mahara
Kubhadhara kuri 3x mahara kunoshanda kune chero kutenga kubva ku79 €.
Otomatiki email paunogamuchira yako masampuli. Yechokwadi-nguva yekutarisa kufambira mberi kwekuongorora kwako. Kuwana zvachose zvitupa zvako zveDNA.
Anenge ese miedzo yedu inowanikwa neiyo yakajeka sarudzo. Nekuisa pamberi pekuongorora kwako, tinokuvimbisa kunonoka kwakanyanya.
Dhawunirodha mhinduro dzako mumitauro inopfuura zana nemakumi manomwe nenomwe kuitira kuti kuve nekuchinjana pakati penyika
Odha pakiti yeDNA bvunzo izvozvi kuti uwane mutengo uri nani uye wotumira masampuli ako panguva dzakasiyana mukati memuganhu wemakore maviri. Semuenzaniso, unogona kutumira maviri sampuro mangwana, matatu mamwe mumwedzi miviri nezvimwe
Ini ndoda kuhodha DNA test yeyangu
Yedu yekupedzisira yakagadziriswa DNA bvunzo
LPN2 Polyneuropathy mhando 2 muLeonberger
New DNA bvunzo: LEMP muLeonberger
New DNA bvunzo: IMM muKota Bhiza
Bvunzo dzeDNA dziripo
Bvunzo dzeDNA dzakaitwa
Yedu yekufukidza renji
Tsvaga chaiko kuvandudzwa mukuedzwa kweDNA
Yedu yekufambisa iri nyore kwazvo…
Raira iyo DNA bvunzo uye kunyoresa chipfuwo chako
Isu tinokutumira yako yekuunganidza kit kana mune imwe kesi iwe unogona kushandisa yako wega.
Unganidza sampuro yako ugoitumira ku laboratori yedu
Tora mhedzisiro yako nekukurumidza ne email, tsamba yepositi, SMS etc.
Tsvaga ichi chakatsanangurwa chinyorwa pamatanho akasiyana eodha.
Pinda iwe email
Ndokumbira utumire email
Kero yeemail iyi isiriyo
Takunyoresa chaizvo kune yedu tsamba yenhau
Wakatonyoreswa tsamba yedu
Gara uchiziviswa nezvenhau dzekupedzisira
Kuudzwa nezvekupedzisira kweyekuongorora kweDNA
Ziva nezve zvekushambadzira zvinopihwa
Tora chikamu pachirongwa chedu chekutsvaga
Hunhu ndiko kukosha kwedu
Vashandi vedu vakarovedzwa vanoshandisa tekinoroji yepamberi ye21st Century kusangana nezvinodiwa zveDNA yega yega bvunzo.
Genimal Biotechnlologies inoenderera mberi nekudyara mune ramangwana rekuyedzwa kweDNA nekutenga yekucheka-kumucheto chimbo. Isu tinoshandisa otomatiki bio marobhoti ayo anopa akasarudzika masevhisi uye chaiyo uye yakajeka mhedzisiro kune ese eDNA bvunzo yatinoita.
Genimal Biotechnologies ine vanopfuura 10000 vatengi uye veterinarian pasirese vari kushanda nesu vatiri kupa iro rakatanhamara uye rakasarudzika sevhisi.
Genimal iri kushingairira kusimudzira miedzo mitsva yeDNA, kunyanya mumunda wezvirwere zvezvirwere mumaimbwa, katsi nemabhiza.
Zvimiro zveEco zvine hushamwari
Genimal yakazvipira mukugadzira zvirevo zvitsva zvinoremekedza nharaunda. Ethidium bromide (nucleic acid banga) yakasiyiwa ichida zvigadzirwa zvisina chepfu. Reaction zvigadzirwa zvakapetwa hafu mumakore gumi.
Chizvarwa chinotevera chinosvika
Ese edu maDNA ekuyedza maprotocol ari kuwedzera zvishoma nezvishoma kuenda kuchizvarwa chitsva nzira dzinovimbisa yakavimbika uye nekukurumidza mhedzisiro (kazhinji zuva rimwe).
Kuchengetedza mhuka dzesango
Genimal inobatanidzwa muzvirongwa zvekutsvaga pamusoro pekuchengetedzwa kwemhuka dzesango nenzvimbo yayo. Isu tinoshanda takabatana neONCFS pazvirongwa zvakasiyana uye nemapaki emhuka.
Kutenda kumatekinoroji matsva, GENIMAL yakagadzira iyo Ratidza sarudzo. Iyo inoshamisa inokasira sarudzo uye vimbiso yemhedzisiro mune ipfupi inogoneka nguva.
Zvirwere zvinotapukira 24h
Chirwere cheGenetic uye colortest 72h
Chizvarwa chinotevera Express protocol iri munzira uye yakawanda yeiyo genetic chirwere ichave ichiwanikwa muna 24h munguva pfupi iri kutevera.
Yechokwadi nguva DNA bvunzo yekutevera
Gara uchiziva kufambira mberi kwekuongororwa kwayo.
Enda kune yekutevera system
Kubatanidza DNA bvunzo uye chengetedzo
Zvitupa zvedu zvese zveDNA zvine kodhi yekuchengetedza. Iyi kodhi inokanganisa-chiratidzo.
Tarisa chitupa changu
Yedu webhusaiti yakachengeteka zvizere uye kuwana kune ako ese data kwakachengetedzwa.
Vatengi vedu Vanoti Nezvedu
musha Uwandu hwese: ★★★★★ 4.9 maererano ne 150 wongororo.
Ona Zvese Ongororo